कांग्रेस, एमाले र राप्रपा परित्याग गरी ४ दर्जन बढी कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कांग्रेस, एमाले र राप्रपा परित्याग गरी ४ दर्जन बढी कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश !
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राप्रपा परित्याग गरी ५२ कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । उत्तरी रसुवाको आमा छोदिङ्मो गाउँपालिकास्तरीय उक्त दलको प्रथम सम्मेलन कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्मेलन आइतबार शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले अहिले यो दल दुप्लाएको जस्तो देखिए पनि आगामी निर्वाचनमा विसं २०६४ कै अवस्थामा फर्कने बताए ।